Waa Imisa guud lacagaha laga qaaday Musharaxiinta Guddoonka Baarlamaanka?.
Tuesday January 10, 2017 - 13:42:11 in Wararka
Guddoomiyaha Guddiga qaban qaabada doorashada Guddoonka Baarlamaanka Somaliya C/raxmaan Ducaale Bayle ayaa ka war bixiyay halka ay ku baxeyso lacagta ay ka qaadeen Musharixiinta u tartamaya Guddoonka iyo labadiisa ku xigeen.
Guud ahaan Musharaxiinta u tartamaysa xilka Guddoonka Baarlamaanka ayaa gaaraya 22 Musharax, kuwaasi oo u kala taagan qabashada xilalka Guddoomiyaha Baarlamaanka, Kuxigeenka Koowaad iyo Ku xigeenka labaad.
C/raxmaan Ducaale Bayle, ayaa sheegay lacag dhan $240,000 oo Doolarka Mareykanka ah inay ka qaadeen Musharixiinta u tartamaya xilalka saddexda ah.
Waxa uu sheegay in lacagtaas ay ku dhacday Bankiga dhexe ee dalka islamarkaana ay si wanaagsan u maamulayaan Guddiga qaban qaabada Doorashooyinka Guddoonka Baarlamaanka Somaliya.
Lacagta ayuu Xildhibaan Bayle sheegay in ay ku qaban doonaan doorashada Guddoonka iyo labadiisa ku xigeen iyo howlaha kale ee ay ka mid tahay amniga doorashada inta ay socoto, islamarkaana dhaqaalahan uu ku baxaayo halkaasi.
Waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay in aan musuq lagu sameyn lacagta laga qaaday musharixiinta ee ay ku shubeen Bankiga dhexe ee Somaliya.
Marka la eego lacagaha faraha badan ee laga qaaday Musharaxiinta u taagan xilka Guddoonka Baarlamaanka Somaliya waa mid aad u badan, xilli dalka ay ka jirto Abaaro xoogan oo u baahan in gurmad loo sameeyo dadka dhibaataysan.